I-China 358 yocingo oluphakamileyo locingo lokhuseleko lwesicelo seentolongo, ukwakha ucingo ngokhuseleko lwepropathi yoMvelisi kunye noMthengisi | Pro kocingo
358 ucingo High umnatha wocingo for iintolongo applic ...
Iphaneli yocingo lwesinyithi esenziwe ngesinyithi se-appli yoyilo
I-BRC yeWelded Mesh Fence yoBugcisa bokwakha
L-ezimilise welding ucingo wocingo ukuba bu zokwakha ...
I-358 yocingo oluphakamileyo locingo lokwenza isicelo seentolongo, ukwakha ucingo ngokhuseleko lwepropathi
Ucingo lokucoca ucingo oluphezulu lwama-358 lukwabhekisa ku-358 wocingo lokulwa nokunyuka, i-358 yocingo lokulwa nokunyuka. Isetyenziselwa ukubiya ngokhuseleko entolongweni, emkhosini nakwezinye iindawo kufuna ukubiya ngokhuseleko oluphezulu.
I-PRO.FENCE ivelisa kwaye isasaze uluhlu lwecingo lokucoca umnatha ukuhlangabezana nezicelo ezininzi. Sineqela elifanelekileyo kunye noomatshini abaphambili abanokunikezela ngempahla ngaphakathi kweentsuku ezili-14 emva kokufunyanwa komyalelo. Iqela lethu le-QC lilawula umngcelele wenxalenye nganye yocingo kubandakanya ukuwelda, ukugoba, ukutyabeka kwaye sinikezela ngenkonzo yokuhlangana kwangaphambili kocingo ukugcina ixesha kwindawo.
Olu hlobo lwama-358 locingo oluphezulu lokhuseleko lwenziwe ngentsimbi ethambileyo. Kwaye ngesiqhelo ogqityiweyo shushu nkxu Isefu wawutyabeka. Kuyafana nolunye ucingo olubiyelweyo kumngcelele kodwa umnatha mncinci uqikelelwe kwi-76.2 × 12.7mm kunye ne-4mm ubukhulu becingo zentsimbi. Ke kunzima kakhulu ukungena nokuhlasela usebenzisa izixhobo eziqhelekileyo zesandla. I-PRO.FENCE ibonelela ngocingo oluchasayo lokunyuka okungama-358 lwenziwe ngemasti enzima kunye nenqanaba eliphezulu lokhuseleko kububanzi be-2500 mm kunye nokuphakama kwe-2000mm ukuya kwi-3300mm. Iiphaneli ezininzi zinokufakwa ngaphezulu kwenye nenye. Kungoko unokufikelela kubude obupheleleyo be-6300 mm.
I-358 yocingo oluphezulu lokhuseleko locingo njengokuchasana nokunyuka kunye nokulwa nokusikwa kwemiqobo kulungele ukubiyelwa
Iintolongo, indawo zomkhosi, iipropathi zorhwebo kunye nezorhwebo, izityalo zamandla, izibhedlele ezikhuselekileyo njl.
Umnatha: 76.2 × 12.7mm
Ubungakanani bePaneli: H2000-3000mm × W2400mm
Iposi: 60 × 60 × 1.5mm
Isiseko: iimfumba zomhlaba, ibhloko yesamente
NeZilinganisi: SUS304 / eshushu nkxu kwalenza
Kugqityiwe: Hot-nkxu kwalenza / Powder wawutyabeka
I-1) Yenziwe ngocingo lwekhabhoni esemgangathweni ubuncinci i-4mm ubukhulu kwaye uyigqibe kwisitya esishushu esisikiweyo (i-zinc isonge ukuya kwi-450g / m2). Abo badlala indima ebalaseleyo kwi-anti-corrosion kunye nobomi benkonzo ende ngokunjalo.
2) Isithuba somnatha se-76.2 × 12.7mm nge-4mm ubukhulu oshushu oshushu osikiweyo yenza kube nzima kakhulu ukusika nokunyuka. Ngocingo oluhlabayo phezulu, isuti ibe kwinqanaba eliphezulu lokhuseleko lwentolongo, isibhedlele, isiseko semikhosi, isikhululo seenqwelomoya njalo njalo.
3) Kulula ukuhambisa kunye nokufaka.
Into NO.: PRO-12 Ixesha Lead: 15-21 DAYS Imveliso Orgin: CHINA
Intlawulo: EXW / FOB / CIF / DDP Ukuhambisa iZibuko: TIANJIANG, CHINA I-MOQ: I-50SETS
Egqithileyo I-3D egobileyo yocingo oluthambileyo locingo, ucingo oluthandwayo lwe-mesh ucingo njengocingo lokhuseleko lokuhlala eMntla Melika
Okulandelayo: Isangqa kabini Powder Camera wocingo olubiyele zobunjineli kaMasipala
Kucingo olubiyele ngesinyithi
Welding enemingxuma welding
Welding wocingo wocingo
Iphaneli yentsimbi yocingo olwenziwe ngomatshini ...
L-ezimilise welding ucingo wocingo ukuba wezakhiwo ...
Chain Link Kucingo olubiyele ngenxa yorhwebo ...
PVC camera welding wocingo rolls ngenxa mveliso ...
Isangqa Double Powder Camera wocingo
Ngaba ufuna ukongeza isibhakabhaka kwiminqweno yakho?
Nxibelelana nathi namhlanje ngokubonisana noyilo.
Phendula kuwe ngokukhawuleza
Idilesi:Inombolo 31 Anling 2nd Road, Xiamen, China
Umnxeba:+ 86-592-5550626 (waseJapan)
Umnxeba:+ 86-592-5552829 (isiNgesi)
Sivulekile: Mn-Fr: 8: 30 am-6: 00 pm